छोराले प्रेम विवाह गरेकी बुहारीलाई पहिलो पटक घरमा देखेर सासु बेहोस् , आखिर किन यस्तो भयो ? यस्तो छ कारण जन्नुहोस – – " कञ्चनजंगा News "
छोराले प्रेम विवाह गरेकी बुहारीलाई पहिलो पटक घरमा देखेर सासु बेहोस् , आखिर किन यस्तो भयो ? यस्तो छ कारण जन्नुहोस –
No Comments on छोराले प्रेम विवाह गरेकी बुहारीलाई पहिलो पटक घरमा देखेर सासु बेहोस् , आखिर किन यस्तो भयो ? यस्तो छ कारण जन्नुहोस –
एजेन्सी । छोराले प्रेम विवाह गरेकी बुहारी घर खोज्दै आइन् । जब नयाँ बुहारीलाई सासुले पहिलो पटक देखिन् वेहोस भइन् । यस्तो अनौंठो विवाह भारतको सासाराम, बिहारमा भएको छ, जुन जताततै चर्चा भइरहेको छ। जब सासु बुद्धीले वुहारीलाई देखिन् विवाहलाई स्वीकार गरिनन्। वास्तवमा केटोले किन्नरसँग विवाह गरिसकेका थिए। समाजको कारण, सासूले उनीहरू दुबैलाई घरबाट बाहिर निकालिदिइन् ।
घटना सासाराम जिल्लाको कारघरको हो। नपुंसकसित विवाह गर्ने युवकको घरमा भनाभन भएको छ। परिवारका सदस्यहरू कुनै शर्तमा बुहारी स्वीकार गर्न तयार थिएनन्। जानकारीका अनुसार कर्गहारका गोलू पहिले डान्स पार्टीमा काम गर्थे। यसैबीच उनी पानापुर निवासी किन्नर नन्दनीसँग प्रेममा परे। दुवैले सँगै बस्ने निर्णय गरे र विवाह गरे।
विवाह पछि गोलू आफ्नी श्रीमती नन्दनीसँग कारघरको एउटा भाडाको घरमा बस्दै थिए। परिवारका सदस्यहरूले जब यो कुरा थाहा पाए, तिनीहरूले दबाब दिएर छोरालाई किन्नर बुहारीबाट अलग गर्ने प्रयास गरे। तर जब केहि चीजहरू काम गरेनन्, तिनीहरूले बुझे पछि उनीहरूले आफ्नो छोरोलाई घरमा ल्याए।
← अनलाईन पढ्छु भन्ने ७ वर्षीय छोरीले मोबाइल यस्तो भिडियो हेरेको आमाले देखेपछि (भिडियो सहित) → भिटेनको नयाँ गीत ‘गल्ली सडक’ युट्युव ट्रेन्डिङ वानमा